1.ဤငါးကိုအစာကျွေးသည့်အပြောင်းအလဲလိုင်းများကိုငါးများကဲ့သို့ရေနေသတ္တဝါများနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာအဖြစ်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်, အပူပိုင်းဒေသငါး, ငါးခူ, ပုစွန်, ခွေး, ကြောင်နှင့်စသည်တို့.
3.ဒီငါးအစာကျွေးခြင်းလုပ်ငန်းသည်ပြောင်းဖူးမှစီးပွားဖြစ်လုံးလေးများပြုလုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, ပြောင်း, မြက်ပင်, အစေ့, ပရိုတိန်း, သကာရည်နှင့်အစ, နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးစုံနှင့်အတူနောက်ဆုံးလုံးလေးများ, ထူးခြားတဲ့အရသာ, ကြွယ်ဝသောအာဟာရများနှင့်ဒဏ်ငွေ texture.
ကျွန်ုပ်တို့၏ရေပေါ်ငါးအစာတောင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်အစာတောင့်ထုတ်လုပ်မှု၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်သည်. ဒီငါးအစာကျွေးခြင်းလုပ်ငန်းသည်ပြောင်းဖူးမှစီးပွားဖြစ်လုံးလေးများပြုလုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, ပြောင်း, မြက်ပင်, အစေ့, ပရိုတိန်း, သကာရည်နှင့်အစ, နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးစုံနှင့်အတူနောက်ဆုံးလုံးလေးများ, ထူးခြားတဲ့အရသာ, ကြွယ်ဝသောအာဟာရများနှင့်ဒဏ်ငွေ texture, နှင့်ဤငါးအစာကျွေးခြင်းအပြောင်းအလဲနဲ့လိုင်းများကိုငါးများကဲ့သို့ရေနေသတ္တဝါများနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာအဖြစ်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်, အပူပိုင်းဒေသငါး, ငါးခူ, ပုစွန်, ခွေး, ကြောင်နှင့်စသည်တို့. စူပါအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှု, မြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှု, ကျွန်ုပ်တို့၏ရေပေါ်ငါးအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်အလယ်အလတ်နှင့်အကြီးစားအစာကြိတ်ခွဲစက်များနှင့်မွေးမြူရေးခြံများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်. ကွဲပြားခြားနားသောစွမ်းရည်နှင့်အတူအပြည့်အဝလုံးလေးထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများကိုလည်းဖောက်သည် '' သတ်သတ်မှတ်မှတ်တောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ရရှိနိုင်ပါသည်.
ဤရေပေါ်ငါးအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်တိရိစ္ဆာန်ငါးအစာတောင့်များအားအထူးထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အသစ်တီထွင်ခဲ့သည်. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များအရဤထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်ရေပေါ်ငါးအစာကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်, နွေးထွေးသောငါးအစာကျွေး, အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစာကျွေး, မွေးမြူရေးအစာ, စသည်တို့. အဆိုပါထုတ်ကုန်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးစုံရှိနိုင်ပါသည်, ထူးခြားတဲ့အရသာ, တိရစ္ဆာန်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစာစားသည့်အလေ့အထကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်အာဟာရဓာတ်များပါ ၀ င်သည်. စူပါအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်မြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှု, ကျွန်ုပ်တို့၏ရေပေါ်ငါးအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်အလယ်အလတ်နှင့်အကြီးစားအစာကြိတ်ခွဲစက်များနှင့်မွေးမြူရေးခြံများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးအစာထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်းသည်ဟယ်ကျူလုံးအပါအ ၀ င်အပါအ ၀ င်ငါးအမျိုးမျိုးအတွက်လုံးလေးများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်, ငါးခူလေးများ, CatCarp တောင့်တင်းသည်, ရောက်ရေချိုငါးလုံး, Hemp လုံးလေးများ, CSL လုံးလေးများ,စသည်တို့.
အစပစ္စည်းများ→ရောစပ်ခြင်း→လွှဲပြောင်းခြင်း→ extrusion puffing →လွှဲပြောင်းခြင်း→ခြောက်သွေ့ခြင်း→အအေး→စစ်ဆေးခြင်း→ရေမှုန်ရေမွှား→ရာသီအလိုက်→ထုပ်ပိုးခြင်း
အရောအနှော→လွှဲပြောင်းယူစက်→ extruder →ဓာတ်လှေကား၊ လေမှုတ်စက်→အအေး→တုန်ခါနေသောမျက်နှာပြင်→ဓာတ်လှေကား→ရေနံဖြန်းစက်→အလိုအလျောက်ထုပ်ပိုးစက်
◇အဆိုပါနည်းပညာဆိုင်ရာ parameter သည်, ထိုကဲ့သို့သောကုန်ကြမ်းအဖြစ်, အပူချိန်, နှင့်အစိုဓာတ်, ဒီငါးအစာထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ၏ချိန်ညှိသည်. ဒီအပင်မှထုတ်လုပ်သောရေပေါ်ငါးအစာများသည်လှပသောအသွင်အပြင်ရှိသည်, ထူးခြားသောအရသာနှင့်ဆန် - အာဟာရ, မတူကွဲပြားသောငါးနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်သင့်တော်သည်.
fish ငါးအစာလေးများသည်တိရိစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်ရာတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်, ထိုကဲ့သို့သောခွေးအဖြစ်, ကြောင်, ငါး, မြေခွေး, ငှက်များနှင့်အခြားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ.
◇ဤရေပေါ်ငါးအစာကျွေးခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်းသည်ဝက်အူကိုဖယ်ထုတ်သည့်နည်းကိုအသုံးပြုသည်. ငါးအစာတောင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်, ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းကြိတ်ခွဲကနေချောထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးရန်, တစ်ခုမှာတစ်ကြိမ်မှာလက်စသတ်.
this ဤစက်ရုံရှိငါးအစာစက်များအားလုံးသည်တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုနှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာများဖြင့်တည်ရှိသည်. ဒါဟာလက်ရှိစျေးကွက်အပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောဖောက်သည်များ၏ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်နိုင်ပါတယ်.